Kooxda Juventus oo go’aamisay saxiixa Weeraryahanka Liverpool ee Mohamed Salah – Gool FM
Kooxda Juventus oo go’aamisay saxiixa Weeraryahanka Liverpool ee Mohamed Salah
(Turin) 19 Abriil 2019. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa la soo warinayaa inay go’aamisay inay la soo saxiixato Weeraryahanka Naadiga Liverpool ee Mohamed Salah suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Juve ayaa aad ugu dhow inay markeedii siddeed oo xiriir ah ku guuleysato horyaalka Serie A, laakiin kooxda difaacanaysa horyaalka Talyaaniga ayaa markale ku guuldarreysatay inay xilli ciyaareedkan hanato Champions League kaddib markii ay Ajax ku soo reebtay iyaga siddeed dhammaadka tartankan.
The Old Lady ayaa la warinayaa inay lacago badan qarash-gareyn doonto xagaagan, Jariiradda Gazzetta dello Sport ayaana warinaysa in Salah uu hoggaaminayo bartilmaameedyada kooxda suuqa kala iibsiga ee soo aaddan, maadaama ay Juve raadinayso ku guuleysiga tartanka Koobka Horyaallada Yurub tan iyo 1996-kii.
Liverpool ayaa dhowaan diiday wararka soo jeedinaya in Salah uu doonayo inuu ka tago garoonka Anfield xagaagan, iyadoo Real Madrid sidoo kale la warinayo inay indhaha ku heyso horumarka uu sameynayo laacibkan.
Yeelkeede, Waxaa la soo sheegayaa inay Juventus dagaal adag u geli doonto sidii ay u soo qaadan lahayd xiddiga reer Masar ee Salah, kaasoo 23 gool dhaliyey 11 kalena dhiibay 46 kulan oo uu u saftay kooxda Liverpool inta lagu guda jiro xilli ciyaareedkan 2018-19.
Tan iyo markii uu u soo dhaqaaqay kooxda Merseyside-ka ee Reds waxa uu 26 sano jirkaan dhaliyey 67 gool 98 kulan oo uu ciyaaray tartammada oo dhan.